Thit Htoo Lwin: 1/15/12 - 1/22/12
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ပါကစ္စတန် သမ္မတဇာဒါရီ တွေ့ ဆုံမည်
ပါကစ္စတန် သမ္မတ အဆစ်ဖ် အာလီ ဇာဒါရီ။
ချစ်ကြည်ရေး ခရီး လာရောက်မည့် ပါကစ္စတန် သမ္မတ အဆစ်ဖ် အာလီဇာဒါရီ သည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်၌ တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ယနေ့ညနေတွင် တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
ပါကစ္စတန်ဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နမူနာယူရမယ်လို့ သမ္မတ ဇာဒါရီက ပြောဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဇနီးဖြစ်သူ ၀န်ကြီးချုပ် ဘနာဇီယာ ဘူတို လုပ်ကြံခံခဲ့ရတာ လေးနှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဘူတို ဂူဗိမာန်မှာ ကျင်းပတဲ့ နှစ်လည်ပွဲ တက်ရောက်လာသူ ပရိသတ် သုံးသိန်းကျော်ကို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ဘနာဇီယာ ဘူတိုကို အကောင်းဆုံးဂုဏ်ပြုတဲ့နည်းကတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့တကွ တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ကြံစည်နေတာတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ပါပဲလို့ သမ္မတ ဇာဒါရီက ပြောပါတယ်။
ပါကစ္စတန်မှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပေါ်ထွက်နေချိန်မှာ ဇာဒါရီက အခုလို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘဲဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းစဉ်ကို နမူနာယူသင့်ကြောင်းလည်း ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လိုအပ်နေကြောင်း၊ အင်အားကြီးအမေရိကန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိရာကို သွားရကြောင်း၊ သူ့လမ်းစဉ်ကို နမူနာယူသင့်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ထူထောင်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တာကို
ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ အတတ်ပညာဖြစ်ကြောင်း ပါကစ္စတန်သမ္မတ ဇာဒါရီက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
1/23/2012 07:47:00 PM
မြန်မာတိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကို ခြေစွမ်းကို ဂျာမန်ဘွန်ဒတ်စ်လီဂါတွင် စမ်းသပ်ရန် ကမ်းလှမ်း
မြန်မာဘောလုံးအသင်း တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကိုရဲ့ ခြေစွမ်းကို ဂျာမန်ဘွန်ဒတ်စ်လီဂါ ကလပ်တွေမှာ စမ်းသပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကိုရဲ့ ခြေစွမ်းကို စမ်းသပ်ဖို့အတွက်​ဘောလုံးအေးဂျင့်ဆီကနေ ဆက်သွယ် ကမ်းလှမ်းတာပါ။
ဒါနဲ့ ပက်သက်လို့ ကျော်ကိုကိုရဲ့ ကလပ် ဖြစ်တဲ့ ဇေယျာရွှေမြေအသင်းရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးနီပေါက အခုလို ပြောပါတယ်။
“အေးဂျင့် တယောက် ကျနော်တို့ဆီကို ဆက်သွယ်လာတာ။ ရိုးမေးနီးယား အေးဂျင့်က။ ကျနော်တို့က
ခြေစွမ်းစတက်ပြီးလို့ သူက ကွာလဖိုင်း ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင် သူ့ရဲ့ ပထမ ကန်ထရိုက်မှာ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကနေပြီးတော့ ၇၀၀၀ စရမှာ။”
တကယ်လို့ ဂျာမန်ကလပ်တခုခုက ခြေစွမ်းကို သဘောကျလို့ ခေါ်ယူခဲ့ရင် ဇေယျာရွှေမြေ အနေနဲ့ သူတို့ တိုက်စစ်မှူးအတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ဒေါ်လာ ၅ သိန်းဝန်းကျင်လောက် ရနိုင်တယ်လို့လည်း ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အေးဂျင့်က ကမ်းလှမ်းတဲ့ အပေါ်မှာ ဇေယျာရွှေမြေအသင်းရဲ့ အသင်းရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌက ခုလို ပြောပါတယ်။
လွှတ်မှာပေါ့။ ယူရိုပီယံလိဂ်ကို ကျနော်တို့ ဗမာနေရှင်နယ် တယောက်အနေနဲ့ တခါသွားတယ်။ ကစားသမားတွေနဲ့ ဂျာမန်ကလပ်တွေမှာ ကစားရမှာ အဆင့်မြင့်လာမှာပေါ့။ မြင့်လာတော့ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့။”
အေးဂျင့်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက် အပေါ်မှာ အသင်းအနေနဲ့လည်း မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို အကြောင်းကြားစာ ပို့ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဆက်ပြောပါတယ်။
အသက် ၂၀ ပဲ ရှိသေးတဲ့ ကာယကံရှင် ကိုကျော်ကိုကိုက “ကမ်းလှမ်းမှုက ကျနော့်အတွက် အခွင့်အရေး တခုပဲပေါ့။ တကယ်ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင်လည်း ကျနော်လည်း လိုလိုလားလား သွားချင်တယ်။ သွားရတဲ့အပေါ်မှာလည်း အဖြစ်သဘောမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဖြစ်အောင်ကို လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ပဲ ကျနော် သွားချင်တာပါ။”
တကယ်လို့ ကျော်ကိုကိုအနေနဲ့ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါက ကလပ်တခုမှာ ကစားခွင့်ရပါက အာရှတိုက်ပြင်ပမှာ သွားကစားတဲ့ မြန်မာ ဘောလုံးသမားတွေထဲကနေ ပထမဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေပါတယ်။
1/23/2012 07:19:00 PM
နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ဟောင်း​၃၅ ဦး​ဟာ ဒီက​နေ့​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ကို သွား​ရောက်​တွေ့​ဆုံခဲ့​ကြပြီး​ရွေး​ကောက်ပွဲကိစ္စ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ကိစ္စနဲ့​ပညာ​ရေး​ကိစ္စ​တွေ ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ပါတယ်။
တွေ့​ဆုံပွဲမှာ ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်က သူတို့​တတွေကို အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်တွင်း​ကို ဝင်​ရောက်​ဆောင်ရွက်ကြဖို့​ကမ်း​လှမ်း​သလို ကြား​ဖြတ်​ရွေး​ကောက်ပွဲမှာ အဖွဲ့​ချုပ် အနိုင်ရရှိ​ဆောင် ပံ့​ပိုး​ကြဖို့​ကမ်း​လှမ်း​ခဲ့​တယ်လို့​အဲဒီပွဲကို​ရောက်ခဲ့​တဲ့​မခင်မိုး​အေး​က ပြောပါတယ်။
တော့​အန်တီအခုသွား​မယ့်​ရွေး​ကောက်ပွဲကို ဝန်း​ရံ​ရေး​၊​ဝင်ချင်တဲ့​လူ​တွေကလည်း​အန်အယ်လ်ဒီကို ဝင်​ရောက်ပြီး​ဝိုင်း​ရံ​ရေး​ပေါ့​နော်။ ဒါ​လေး​ကို ဦး​တည်ပြီး​အန်တီနဲ့​ဆွေး​နွေး​တဲ့​အချိန်မှာ သူ့​အ​နေနဲ့​က​တော့​ဒီ​ရွေး​ကောက်ပွဲမှာ သူ့​ကို
နိုင်​အောင်လို့​ဝိုင်း​ပြီး​တော့​လုပ်​ပေး​ကြပါ။ နောက် အန်အယ်လ်ဒီကို တတ်နိုင်ရင်လည်း​ဝင်ကြပါ​ပေါ့​နော် အန်တီက အဲဒီလို​ပြောတယ်။ ကျမတို့​အား​လုံး​ကလည်း​နိုင်တဲ့​ဘက်က​နေပြီး​တော့​ဝင်ချင်တဲ့​လူ​တွေလည်း​ရှိကြသလို၊​မဝင်ဘူး​ဆိုရင်လည်း​ဘေး​က​နေပြီး​တော့​ကျမတို့​တတ်နိုင်သ​လောက် အောင်နိုင်​ရေး​အတွက် ဝိုင်း​လုပ်​ပေး​ကြမယ်လို့​ကျမတို့​ဒီ​နေ့​အဲဒါကို ပြောခဲ့​ကြပါတယ် ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ကြပါတယ်။”
ကြား​ဖြတ်​ရွေး​ကောက်ပွဲမှာ​တော့​အနိမ့်​ဆုံး​အား​ဖြင့်​ပြည်သူလူထုအတွက် ရွေး​ကောက်ပွဲနဲ့​စပ်လျဉ်း​တဲ့​ပညာ​ပေး​ရေး​လုပ်ငန်း​တွေမှာ ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်ကြဖို့​လည်း​သူတို့​ဘက်က ကတိပြုခဲ့​ကြပါတယ်လို့​ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ဟောင်း​တွေက သူတို့​ပြုစုထား​တဲ့​စာရင်း​အရ ဒီလ ၁၃ ရက်​နေ့​မှာ
နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​၃၀၂ ဦး​လွတ်လာတဲ့​စာရင်း​နဲ့​လက်လှမ်း​မီသ​လောက် အကျဉ်း​ထောင်​တွေထဲမှာ ကျန်ရှိတဲ့​နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​၃၇၅ ဦး​စာရင်း​ကို ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ကို ဒီက​နေ့​ပေး​အပ်လိ်ုက်တယ်လို့​သူက ပြောပါတယ်။
စား​ဝတ်​နေ​ရေး​အခက်အခဲ​တွေ အ​ခြေအ​နေ​တွေကို လက်လှမ်း​မီသ​လောက် ကွင်း​ဆင်း​ပြီး​စာတမ်း​ပြုစုတင်ပြ​ပေး​ဖို့​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်က ဒီက​နေ့​တွေ့​ဆုံရာမှာ မေတ္တာရပ်ခံတယ်လို့​ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံ​ရေး​လုပ်ရင်း​ထောင်ကျလို့​ပညာ​ရေး​တပိုင်း​တစ ဖြစ်ခဲ့​တဲ့​နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​ဟောင်း​တွေအတွက် ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်က ကြိုး​ပမ်း​ဆောင်ရွက်​နေတယ်ဆိုတာ သိခဲ့​ရတယ်လို့​သွား​တွေ့​သူ တဦး​ဖြစ်တဲ့​ကိုထွန်း​ကြည်က ပြောပါတယ်။
အေးနိုင် (ဒီဗွီဘီ) သစ်ထူးလွင်
1/23/2012 07:18:00 PM
နိုင်ငံ​တော်အရန်ဆန် စတင် ဝယ်ယူ
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး​လုပ်ငန်း​အသင်း​က​နေ နိုင်ငံ​တော် အရန်ဆန်ကို စတင် ဝယ်ယူ​တော့​မယ်လို့​သိရပါတယ်။
နိုင်ငံ​တော် အရန်ဆန် တန်ချိန် ဆယ်သိန်း​ကို တောင်သူ လယ်သမား​တွေဆီက တိုက်ရိုက်ဝယ်မယ်လို့​မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး​လုပ်ငန်း​အသင်း​က​နေ သိရပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမား​တွေရဲ့​အ​ခြေခံ စပါး​ဈေး​နှုန်း​ဟာ အရင်နှစ်​တွေထက် ဈေး​ကျ​နေပြီး​တောင်သူ​တွေ စိုက်ပျိုး​စရိတ် ကာမိရုံနဲ့​နွေစပါး​တွေ အရင်း​နှီး​ရ​အောင် အခုလို ဝယ်ယူတာလို့​မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး​လုပ်ငန်း​အသင်း​က ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦး​အောင်သန်း​ဦး​က ပြောပါတယ်။
“​တောင်သူလယ်သမား​တွေရဲ့​အ​ခြေခံစပါး​ဈေး​တွေ သိပ်ကျ​နေလို့​အဓိက က​တော့​အရန်ဆန်ထက် အ​ခြေခံစပါး​ဈေး​ကျတာကို ကျ​နော်တို့​သူတို့​ဈေး​လေး​တွေ ရ​စေချင်တာ​ပေါ့​နော်။ ကျ​နော် အခု ဝယ်မယ့်​အစီအစဉ်က တောင်သူလယ်သမား​ဆီကပဲ တိုက်ရိုက်ဝယ်မှာဗျ၊​ကုန်သည်ဆီကဆိုရင် မဝယ်ဘူး​ဗျ။ လက်ရှိ​တောင်သူ​တွေ မ​ရောင်း​ဘဲ ကျန်​နေ​သေး​တယ်၊​တချို့​ဈေး​မရလို့​လက်ထဲမှာ ကိုင်ထား​တဲ့​တောင်သူ​တွေအတွက် အဓိက ဦး​စား​ပေး​ဝယ်မှာ။ နောက်တခုက မကြာခင်မှာလည်း​နွေစပါး​ပေါ်​တော့​မှာ။ နွေစပါး​ကျရင်လည်း​သူတို့​အတွက် အ​ထောက်အကူဖြစ်​အောင်။ ပမာဏက​တော့​ကျ​နော်တို့​ငွေရှိသ​လောက် ဝယ်မှာ​ပေါ့​။ တန်ချိန် ၁ သိန်း​နီး​ပါး​ပေါ့​။”
ပြင်ပ ပေါက်​ဈေး​မှာ​တော့​စပါး​တင်း​တရာကို ကျပ်​ငွေ ၂ သိန်း​၈ သောင်း​နဲ့​၂
သိန်း​၉ သောင်း​ကြား​မှာ ရှိ​နေ​ပေမယ့်​လည်း​ဆန်စပါး​လုပ်ငန်း​အသင်း​က​နေ စပါး​တင်း​တရာကို ကျပ်​ငွေ ၃ သိန်း​၃ သောင်း​အထိ ပေး​ဝယ်တာလို့​ဦး​အောင်သန်း​ဦး​က ပြောဆိုပါတယ်။
အခုလို တောင်သူ​တွေဆီက ဝယ်ထား​ပြီး​တဲ့​နောက်မှာလည်း​နိုင်ငံတကာ ဈေး​ကွက်ကို တင်ပို့​ရောင်း​ချမယ်လို့​ဆိုပါတယ်။
“အဓိကက​တော့​ဈေး​ကွက်ထဲက နေပြီး​တော့​တောင်သူ​တွေ လက်ထဲကို ငွေ​ရောက်ချင်တာ​ပေါ့​။
သူတို့​ငွေ လော​လောဆယ် စပါး​မ​ရောင်း​ရ​သေး​တဲ့​အတွက် ငွေမလည်တာတို့​ဘာတို့​ကျ​နော်တို့​ကလည်း​ဒီဟာ​တွေ တကယ်လက်ရှိလည်း​လက်ထဲမှာထား​မယ်။ တချို့​တဝက်လည်း​စပါး​ဈေး​ကွက်ထဲမှာ ပြန်ပြီး​တော့​မှ export လုပ်မယ်။ အဲဒါ ရောင်း​ပြီး​ရင်လည်း​ပြန်ဝယ် ဖြည့်​သွား​မှာ​ပေါ့​။”
ပြင်ပ​ပေါက်​ဈေး​ထက် တောင်သူ​တွေဆီက​နေ ဈေး​မြင့်​ပေး​ဝယ်​ပေမယ့်​ကုန်သည်​တွေပဲ အကျိုး​ရှိနိုင်မယ်လို့​ရန်ကုန်အ​ခြေစိုက် စီး​ပွား​ရေး​ဆောင်ပါး​ရှင် တဦး​က သုံး​သပ် ပြောဆိုပါတယ်။
“တကယ်တမ်း​လယ်သမား​တွေက အ​ကြွေး​ရှိတဲ့​အခါကျ​တော့​အ​စောကြီး​ကလည်း​က ရောင်း​ထုတ်လိုက်ပြီ။ ဆန်​တွေက သူတို့​လက်ထဲမှာ မရှိ​တော့​ဘူး​။ ကုန်သည်​တွေ လက်ထဲကို ရောက်သွား​ပြီ။ အခု ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း​ကုန်သည်​တွေပဲ
အဆင်​ပြေမှာ။ လယ်သမား​ကို အဆင်​ပြေ​အောင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်​ဈေး​ကျ​နေတာကို ပြန်တက်သွား​အောင် ဆိုပြီး​တော့​၃၃ (စပါး​တင်း​တရာကို ၃
သိန်း​၃ သောင်း​) ပေး​ပြီး​ဝယ်တာပဲ။ ဒါ​ပေမယ့်​ခက်တာက လယ်သမား​က အ​ကြွေး​ရှိ​တော့​အ​စောကြီး​ကတည်း​က အကုန် ရှင်း​ထုတ်လိုက်တဲ့​အခါကျ​တော့​သူ့​လက်ထဲမှာ ဆန်မရှိ​တော့​ဘူး​။ ဈေး​ကောင်း​ပေး​ဝယ်​နေတဲ့​အချိန်မှာ သူ့​လက်ထဲမှာ ဆန်က မရှိ​တော့​ဘူး​။ ၃၃ နဲ့​ရောင်း​တဲ့​ဟာကို အဆင်​ပြေသွား​မှာက ကုန်သည်​တွေပဲ။ ကုန်သည်​တွေ လက်ထဲမှာပဲ ဆန်ရှိတယ်။”
1/23/2012 07:15:00 PM
အခြားပါတီကနိုင်သွားရင်လည်း ဂုဏ်ပြုပေးဖို့ ၀န်လေးစရာမလိုပါဘူး မိမိတို့အနေနဲလွှတ်တော်ကနေစောင့်ကြိုနေမှာပါ...(သူရဦးရွှေမန်း) ဓါတ်ပုံ (မက်ဆင်ဂျာဂျာနယ် ဖေ့စ်ဘုတ်)
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အထူးစည်းအဝေးကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ သူရဦးရွှေမန်း၊ ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဌေး ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ ကိုယ်စားလှယ် ၈၀၉ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကာ ယခင်အသင်း အနေမှ ပါတီ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ပထမဆုံးကျင်းပသည့် အထူးအစည်းအဝေးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် သူရဦးရွှေမန်းက ပါတီအနေဖြင့် ပြည်သူလူထုအတွင်းမှ အခြေအ နေမှန်များကို ရှာဖွေလေ့လာသုံးသပ်ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အ စည်းများမှ ဆောင်ရွက်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရေးများကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး များရရှိရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူ့သဘောထား၊ ပြည် သူ့ဆန္ဒများည် ကောင်းမွန်အကျိုးရှိပါက ရဲရဲ့ဝံ့ဝံ့ သတ္တိရှိရှိ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ ဒုက္ခမ ရောက်စေရန်၊ စိုးရိမ်သောကစိတ်များ မရှိစေရန်၊ စိုးရိမ်သောကစိတ်များ မရှိစေရန်တို့ကို ပါတီအနေဖြင့် တက် စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၄င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
သတင်း။ ။ Weekly Eleven News Journal သစ်ထူးလွင်
1/23/2012 05:17:00 PM
ကချင် ဒုက္ခသည်များသို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှာစကား (ရုပ်/သံ)
၂၃ ဇန် ၂၀၁၂ တနင်္လာ။ ။ ကချင် ဒုက္ခသည်များသို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှာစကား။ ။
1/23/2012 05:10:00 PM
ကဗျာဆရာ (ဦး) တင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၅ နှစ်ပြည့် အစီအစဉ် အပိုင်း (၂) (ရုပ်/သံ)
၂၂ ဇန် ၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ ။ ။ ကဗျာဆရာ (ဦး) တင်မိုး ၁၉၃၃- ၂၀၀၇ ဇန် ၂၂ ကွယ်လွန်ခြင်း ၅ နှစ်ပြည့် အစီအစဉ် အပိုင်း (၂)
1/23/2012 05:04:00 PM
လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုပွဲ (ရုပ်/သံ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေက အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှ လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားတခုကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ကအင်းစိန်မြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခမ်းအနားကို
ပြန်လည်လွတ်မြောက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးဝင်းထိန်နဲ့ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် အယောက် ၁၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဦးဝင်းတင်က သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ကိုဒီငြိမ်းလင်းက ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ စတာတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
1/23/2012 04:56:00 PM
ကျောက်မဲမြို့က န၀မတန်း ကျောင်းသူလေးတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ အံသြထိတ်လန့်စရာပါ။
ဖြစ်ပုံကတော့ ကျောက်မဲမြို့ အထက (--- ) မှ န၀မတန်းကျောင်းသူလေး သုံးယောက်ဟာ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ chatting ထိုင်ရင်း ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ ကို ------- ( Ph No. ------) နဲ့ ခင်မင်မိကြပါသတဲ့။ ဖုန်းအဆက်အသွယ်လည်း ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ online chatting တို့သဘာဝအတိုင်း အပြင် မှာ တွေ့ကြရအောင် ဘာညာပေါ့လေ။ နောက် chatting ခဏခဏ လုပ်ကြရင်း ကျောင်းသူလေးတွေက
ရန်ကုန်လိုက်သွားဖို့ စိတ်ဝင်စား လာကြပါတယ်။
ကျောက်မဲက ရန်ကုန်ကို သွားချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးရယ်လေ၊ ကျောက်မဲကို နေ့လည် ၂ နာရီခွဲလောက်မှာ ဆိုက်တဲ့ လားရှိုး-ရန်ကုန် Bus ကားတွေနဲ့ လိုက်သွားရင် နောက်နေ့မနက် ၄ နာရီဆို ရန်ကုန်ရောက်ပြီပေါ့။ ကားခက တစ်သောင်းခွဲလောက် ပေးရတယ်လေ။ အဲဒါကို မချောတို့ အချင်းချင်း တိုင်ပင် ကြပြီး မိဘဆင်ထားတဲ့ ရွှေဆွဲကြိုးကို ရောင်းပြီး 15.1.2012 (တနင်္ဂနွေနေ့) က ရန်ကုန်ကို လိုက်သွားခဲ့ ကြပါတယ်။ လိပ်စာလည်း မသိပဲလိုက် သွားခဲ့ ကြတာနော်။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ ကားဂိတ်ကနေပြီး- ကို ……….. ဆီကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီး လဘက်ရည်ဆိုင်ကနေ စောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။ အဲဒီကို ……... ဆိုတာက လူပျိုကြီး (over 30) တဲ့။ နောက်အဲဒီလူ- ကို ……… လည်းရောက်လာရော သူထင်ထားတာက အရွယ်ရောက်ပြီး မိန်းကလေး အခု တွေ့လိုက် ရတာက ၁၅ နှစ် ၀န်းကျင်
၉ တန်း ကျောင်းသူလေးတွေဆိုတော့ တွေ့တွေ့ပြီးချင်း သူပြောတဲ့စကားက " ကလေးတွေပဲ " တဲ့လေ။ အဲဒါနဲ့ ကို ……… လည်း ကောင်မလေးတွေကို အိမ်ကို ခေါ်သွားရတော့တာပေါ့လေ။
ကျောက်မဲမှာကလည်း မိဘတွေက ညရောက်လို့ ပြန်မလာတဲ့ သမီးတွေကို စိတ်ပူပြီး လိုက်ရှာကြတဲ့အခါ ရန်ကုန်ကားနဲ့ လိုက်သွားတဲ့ အကြောင်းသိရ ပါတယ်။ နောက်သူတို့ သုံးယောက်နဲ့ ရန်ကုန်လိုက်မယ် လုပ်ပြီးမှ မလိုက်ဖြစ်တဲ့ ကောင်မလေးဆီ သတင်းစုံစမ်းတဲ့အခါ ကောင်မလေးက ပထမပိုင်းမှာ သူမသိဘူး ပြောတာတဲ့။ အဲဒါဆိုရင် နင်အဖမ်းခံရမယ် ဘာညာပြောမှ ကို ………… ရဲ့ ဖုန်းနံပတ်ကိုရတာ။ အဲဒါ ကျောက်မဲ ရဲစခန်းကတဆင့် ရန်ကုန် ရဲစခန်းကို လှမ်းကြောင်းကြားလို့ ရန်ကုန်ကရဲတွေ ကို………. ရဲ့ အိမ်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါ ကျောင်းသူလေး သုံးယောက်ကို အဲဒီအိမ်က ကလေးတွေနဲ့ ကစားနေတာတွေ့ ရတယ်တဲ့။ (ကလေးစိတ်မပျောက်၊ လူကြီးစိတ်မရောက်နဲ့ ဒါကြောင့် မနူးမနပ်အရွယ်လို့ ခေါ်တာထင်ပါရဲ့) ရန်ကုန် ရဲစခန်းရဲ့အကြောင်း ကြားချက်အရ ကျောက်မဲက မိဘများက
ရန်ကုန်ကို လိုက်သွားပြီး ပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြတယ်တဲ့။
1/23/2012 04:23:00 PM
တာချီလိတ်တွင် လားဟူတိုင်းရင်းသား(စုပေါင်း)နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် စည်ကားစွာကျင်းပ
တာချီလိတ်မြို့တွင် လားဟူ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ(စုပေါင်း)နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ရှမ်းရိုးမကွင်းပြင်တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ မှ ၂၁ ရက် အထိကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပွဲတော်သို့ တာချီလိတ်မြို့ပေါ်နှင့် တောင်ပေါ်ကျေးရွာနေ လားဟူတိုင်းရင်းသား အများအပြား လာရောက်ခဲ့ပြီး အခြားတိုင်းရင်းသားများလည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပွဲတော်တွင် ခေတ်ပေါ်တေး ဂီတစင်နှင့် လားဟူရိုးရာမြေ၀ိုင်း အတီးနှင့်အကများပါဝင်ခဲ့ပြီး ကျေး ရွာများမှ လားဟူတိုင်းရင်းသား အကများကို ကပြခဲ့ကြကြောင်း၊ ခေတ်ပေါ်တီးဝိုင်းတွင် လားဟူအဆိုတော်များအပြင် နာမည်ကြီးအဆိုတော် များလည်း ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ညစဉ် တိုးမပေါက်အောင် စည်ကားခဲ့ကြောင်း၊ ပွဲတော်တွင်ကံစမ်းမဲများ၊ တိုင်းရင်းသား အ၀တ်အထည်ဆိုင်များ၊ ရိုးရာအစားအစာဆိုင်များ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကစားနည်းများ လာရောက်ဖွင့်လှစ်သူအများအပြားရှိပြီး ရောင်းကောင်း ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
''ကျွန်မက နမ့်တူးရွာက လာတာပါ။ အားလုံးအယောက် ၃၀ ကျော်လာပြီး နှစ်ညအိပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့တိုင်းရင်းသားပွဲတော်လည်းဖြစ်တော့ အရမ်းပျော်တယ်။ ပွဲတော်လာတဲ့သူတွေက ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ အီတန်ကားတွေနဲ့ လာကြပါတယ်။ ရွာမှာအဘိုးအဘွားတွေပဲ ကျန်တယ်။ ရွာလုံးကျွတ် လာကြတယ်။ မြေ၀ိုင်းအကမှာ ရွာတိုင်းကကြတယ်''ဟု နမ့်တူးရွာမှ မနန်းခမ်းက ပြောပြသည်။ EMG
1/23/2012 04:05:00 PM
မိလ္လာတွင်းထဲ လက်စွပ်ဆင်းရှာသူသုံးဦး အဆိပ်ငွေ့ရှူမိပြီး အသက်ဆုံးရှုံး
မိလ္လာတွင်းထဲသို့ ဆာဖြူရစ်အက်ဆစ်ပြင်းထည့်ပြီး လက်စွပ်ဆင်းရှာသူသုံးဦး အဆိပ်ငွေ့ရှူမိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ကျုံကဒတ်စံပြကျေးရွာ ပြည်တော်သာလမ်းနေ ကိုမျိုးမြင့်(ခ)ကွန်ဗလိုင်(၃၉)နှစ်၏ ဇနီး မခင်ခင်မိုးသည် အိမ်သာတက်ရင်း ငါးမူးသား ရွှေလက်စွပ်တစ်ကွင်း မိလ္လာကျင်းသို့ ကျသွားခဲ့ရာ လက်စွပ်ပြန်လည်ရှာဖွေရန် အနီးနားနေထိုင်သူများကို အကူညီတောင်းခံခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
ကိုမျိုးမြင့်သည်ဒေသတွင်း ရော်ဘာခြံများတွင် အသုံးပြုကြသော ဆာဖြူရစ်အက်ဆစ်သုံး ပုလင်းရှာဖွေကာ မိလ္လာကျင်းထဲလောင်းထည့် ပြီးနာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် နော်ကိုကို (ခ)စိတ်တို(၃၄)နှစ်(ဘ)ဦးဥာဏ်သိန်းက ပထမဆုံးဆင်းသွားရာ အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ မည်သည့်အသံမကြား၍ ကိုမျိုးမြင့်
လိုက်ဆင်းသွားပြီး ကျင်းထဲ၌လဲကျ သွားကြောင်း၊ ကျင်းအနီးရှိနေသော ဦးအုံးတင်(ခ)ဖိုးသြ(၅၂)နှစ်(ဘ) ဦးအေးမောင်က အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးကို အသိပေးကာ
အကူအညီပေးရန် လိုက်ဆင်းခဲ့ပြီး ကျင်းထဲအရောက် လဲကျငြိမ်သက်သွားကြောင်း၊ ကျင်းအနားရောက်နေသော ဦးအောင်မြတ်က ကူညီရန်ကျင်းထဲသို့ဆင်းနေစဉ် ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားက လူအများ ၀ိုင်းဝန်းဆွဲတင်ကာ သတိရစေရန်ပြု လုပ်ပြီး သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ဆေးရုံ သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရာ ပြန်လည်သက်သာလာကြောင်း သိရသည်။
ကျင်းထဲကျနေသူသုံးဦးအား ဆယ်တင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်စဉ်အား အပိုင်ရဲစခန်းက သေမှုသေခင်း (၂/၂၀၁၂)ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဟုသိရသည်။ EMG
1/23/2012 03:54:00 PM
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အမှတ် ၆ ရပ်ကွက် ကုန်းမြင့်ရိပ်သာလမ်း အမှတ် ၆ ရှိ စိန်မောင်ရုပ်ရှင် စတူဒီယိုဟောင်းတစ်ခု ဇန်န၀ါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ် အချိန်ခန့်က မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။အဆိုပါ စိန်မောင်ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကို လက်ရှိတွင် ဇာထိုးပန်းထိုး လုပ်ငန်းတစ်ခုအား ငှားရမ်းထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုနှင့်
ပတ်သက်၍ "ကျွန်တော်က ဒီခြံနားက High Land Lodge Hotel ပိုင်ရှင်ပါ။ ကျွန်တော်တစ်ရေးနိုးတော့ အုန်းအုန်းဆိုတဲ့ အသံတွေကြားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ မီးလောင်နေတာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့ မရတာနဲ့ ဂိုဒေါင်က လူတွေကားနဲ့သွားပြီး အကြောင်းကြားရတယ်။ အရင်က ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဟောင်းကြီးပါ။ အခုတော့ ဇာထိုး ပန်းထိုးလုပ်ငန်းကို ငှားထားတာပါ။ ရုပ်ရှင်စက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေနဲ့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စက်ပစ္စည်း တွေရှိပါတယ်။ အသံလုံဖို့အတွက် အသုံးပြုထားတဲ့စပါးခွံတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ စက်ရုံတစ်ခုလုံးတော့ အားလုံးလောင်ကျွမ်းသွားတယ်"ဟု စိန်မောင်ရုပ်ရှင် စတူဒီယိုဟောင်း ပိုင်ရှင်၏သားဖြစ်သူ ဦးတင်ထွဋ်က ပြောပါသည်။ အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုကို မီးသတ်ယာဉ် ၃၃ စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်သုံးစီးတို့ လာရောက်မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ပြီး ၂ နာရီ ၅၀ မိနစ်အချိန်တွင် မီးထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီး ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ် အချိန်တွင် မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
1/23/2012 10:35:00 AM
မိုဘိုင်းဖုန်းလဲလှယ်ခြင်း ကြွေးကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာမလို
မိုဘိုင်းဖုန်းလဲလှယ်ပေးခြင်းကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ကြွေးကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာမလိုတော့ကြောင်း သိရှိရသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများလဲလှယ်ရာ၌ ကြွေးကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာပါမှသာ လဲလှယ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပန်းဆိုးတန်းအိတ်ချိန်းရုံးတွင် ကြော်ငြာစာကပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
“ဖုန်းတွေ စတင်လဲလှယ်ပေးခဲ့ကတည်းက ကြွေးကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာမပေးရပါဘူး။ လက်ရှိလဲလှယ်ပေးပြီးခဲ့တဲ့ ဖုန်းအားလုံးအတွက်လည်း မတောင်းခဲ့ပါဘူး။ ဖုန်းတွေကို လဲလှယ်ပေးတဲ့အခါမှာ ငွေကြေးအရ အပေါင်း၊ အနုတ်ကို နောက်မှပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ၀၁၇၂၊ ၀၉၈၀၊ ၀၉၉၀၊ ၀၉၉၉ အစရှိသည့် နံပါတ်ဖြင့်စသောဖုန်းများကို မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ
ငါးသိန်းတန်ဖုန်းများဖြင့် လဲလှယ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့လဲလှယ်ရာတွင် လဲလှယ်ပြီးဖုန်း၏ ကြွေးမြီကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံစာကို ပေးရန်မလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့လဲလှယ်ပေးခြင်းကို ယခုလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လဲလှယ်လိုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းဘီလ်စာအုပ်၊ စာချုပ်မူရင်း၊ လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင် မူရင်း၊ မိတ္တူတို့လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လဲလှယ်ခြင်းအား နီးစပ်ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးများတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထွန်းထွန်း (အင်တာနက်ဂျာနယ်)
1/23/2012 10:03:00 AM
ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် Weekly Eleven News Journal အတွဲ ၇ အမှတ် ၁၇
Weekly Eleven Vol7 No 17
1/23/2012 09:55:00 AM
The Voice Weekly Vol.8/ No.6
The Voice 8-6
1/23/2012 09:53:00 AM
လှည်းတန်းဈေးအိမ်သာအတွင်း ဗုံးခွဲမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်သူနှစ်ဦးကို ကညနရုံးရှေ့ အငှားယာဉ်ပေါ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ကိစ္စကို စစ်ဆေးရာမှ
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို အငှားယာဉ်ငှားရမ်းပြီး ဗုံးခွဲရန်ကြံစည်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်တွင်အကြံပေးခဲ့သော စာရွက်စာတမ်းအထောက်အ ထားများကို သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းမှ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းမှ လှည်းတန်းဈေးအိမ်သာအတွင်း ဗုံးခွဲမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်သူနှစ်ဦး ဖြစ်သည့် ကတုံး(ခ) ဇော်သက်အောင်(က၀မြို့နယ်နေသူ)တို့နှင့်အောက်ကိုမင်း(ခ) နေမျိုးသူရအောင်(သာယာ ၀တီမြို့နယ်နေသူ) နှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးရာမှ ယခုကဲ့သို့ အထောက်အထားအချက်အလက်များကို သိရှိရခြင်းဖြစ် သည်။ " သူတို့အဖွဲ့က လေးဦး၊ လေးဦးထဲက အခုနှစ်ဦးက ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့အခြေစိုက်တဲ့ VBSW အဖွဲ့မှာ ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အပြင် သင်တန်းပို့ချခြင်းတွေကိုပါ ပြုလုပ်ခဲ့တယ် လို့ စစ်ဆေးသိရှိရတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးက လှည်းတန်းဈေးအိမ်သာဗုံးဖောက်ခွဲမှု၊ အငှားယာဉ်ပေါ်မှာ ပေါက်ကွဲမှု၊ မြို့တော်ခန်းမအတွင်း ဗုံးတွေ့ရှိမှု စတဲ့ကိစ္စတွေမှာလဲ အဓိကပါဝင်ပတ်သက်တယ်" ဟု မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူကပြောသည်။
၄င်းတို့နှစ်ဦးသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ပြည်သူလူထုက အထိတ်တ လန့်ဖြစ်အောင် ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းမှု ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကျူးလွန်လေ့ရှိသည့် ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ အခြေ စိုက် စွမ်းအားဖြင့် ကျောင်းသားများအဖွဲ့အစည်း (VBSW) မှ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။ သင်္ကန်းကျွန်းရဲစခန်းမှ ၄င်းတို့နှစ်ဦးကို(ပ) ၅၁၂/၁၁ ပုဒ်မ ၂၈၆/၃၃၈/၃၀၂ အမှုအား စစ်ဆေး ရာမှ ယခုကဲ့သို့ အရေးတကြီး သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများကို သိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ သင်္ကန်းကျွန်းရဲစခန်းမှ (ပ) ၇၂/၁၂ မတရားအသင်း အက်ဥပဒေနှင့်ပုဒ်မ ၁၇(၁) ဖြင့် ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ရက်က ထပ်မံစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
မုဒုံရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လျောင်းတော်မူဘုရားကြီး
(ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအရှည်ဆုံး လျောင်းတော်မူဘုရားကြီး) ဓါတ်ပုံ-မယ်လိုဒီ
အလျားအတောင် ၆၀၀ ရှိ ဦးခေါင်းတော်ကို ညာလက်တော်ဖြင့် ထောက်ထားသည့် မုဒုံမြို့ နယ်အတွင်း တည်ဆောက်နေသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လျောင်းတော်မူဘုရားကြီးတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများကို သုံးနှစ်အတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဘုရားကြီးအား မုဒုံမြို့နယ် ၀င်းစိန်တောရ သာသနာပြုစခန်းတွင် တည်ဆောက်ထားကာ ဘုရားကြီးအား မွန်ဆရာတော်အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇော်တိက ဓဇဘဒ္ဒန္တကေသရဦးဆောင်စီမံမှုဖြင့် တည်ဆောက် နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၀င်းစိန်တောရကျောင်း ဦးစီးနာယက မွန်သက်ရှည်ဆရာတော်ကြီးမှာ အတောင် ၄၀၀ ပြည့် ဇိနသုခရန်အောင် ချမ်းသာလျောင်းတော်မူဘုရားကြီးကို အမြင့်ပေ ၁၁၀ အထက်၊ အထပ်ရှစ်ထပ်၊ အခန်းပေါင်း ၁၈၂ ခန်းဖြင့် ၁၃၅၃ ခုနှစ် ပြာသိုလပြည့်မှ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ အခန်း ၁၁၀ ကျော်တွင် ဗုဒ္ဓ၀င် ရုပ်ကြွရုပ်လုံး ပန်းချီကားများဖြင့် တည်ဆောက်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။
" လက်ရှိဇိနသုခရန်အောင်ချမ်းသာ လျောင်းတော်မူဘုရားကြီးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာအမြင့် ပေ ၁၂၀ ပေရှိတဲ့ တောင်စောင်းမှာ တည်နေတာပါ။ ၁၃၇၃ ခုနှစ်ကဆုန်လပြည့်နေ့ (၂၀၁၁ ခုနှစ်မေ ၁၇ ရက်က) အုတ်မြစ်ချတည်ဆောက်တာပါ။ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ဦးခေါင်းတော်ကို ညာလက်တော်နဲ့ ထောက်ထား တယ်။ အတောင် ၄၀၀ ပြည့်လျောင်းတော်မူဘုရားကြီးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတာ၊ ဦးခေါင်းတော်က အရှေ့ ဘက်အရပ်မှာ ဦးတည်အနေအထားမှာ ရှိတာတွေပါ။ ဆရာတော်က သုံးနှစ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်မယ်လို့ မိန့်ပါတယ်" ဟု ဆရာတော်တပည့်ဒကာ တစ်ဦးကပြောသည်။
၀င်းစိန်တောရဆရာတော်ကြီးမှာ မုဒုံမြို့နယ်၊ လက်တက်ကျေးရွာဇာတိဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သက်တော်(၉၁) နှစ် ပြည့်ပြီဖြစ်သည်။ သိစီဝရိတ်သင်္ကန်းသုံးထည်ကိုသာ ယူဆောင်၍ သုဿာန်ပေါင်း ၁၃၃ ခု တွင် ကိလေသာကိုပယ်ရန် ဓူတင် ၁၃ ပါးကို ကျင့်ခဲ့သည်။ ၀င်းစိန်တောရစခန်းကို ၁၃၄၃ ခုနှစ်မှ စတင်ထူ ထောင်ခဲ့ရာ ယခုအခါ
စေတီပုထိုးပေါင်း ၄၀၀ ကျော် သာသနိကအဆောက်အအုံ ၄၀ ကျော် တည်ထားခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။ မုဒုံမြို့နယ် လက်တက်ကျေးရွာတွင် အမြင့်ပေ ၁၈၀ ရှိ ဗုဒ္ဓသာသနာထိုင်တော်မူ ရုပ်ပွားတော်ကြီးကို အကြမ်းထည် တည်ဆောက်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပန်းသတင်းဂျာနယ်မှသိရသည်။
1/23/2012 07:43:00 AM
ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်စင်တာမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်း စကားပြောဆိုနေစဉ်။ (ဇန်န၀ါရီလ ၂၂၊
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်တွေ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် သဘာပတိ သူရဦးရွှေမန်းတို့နဲ့ တွေ့ဆုံပါတယ်။ ဒီလို တွေ့ဆုံတာမှာ အမေရိကန် အစိုးရက မြန်မာအပေါ် အရေးယူထားတဲ့ စီးပွားရေးအရ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့တယ် လို့လည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သူတွေက ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ မသိင်္ဂီထိုက်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာအပေါ် အရေးယူထားတဲ့ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းရေးမှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားကလည်း အရေးကြီးတယ် ဆိုပြီး သူတို့က ပြောဆိုထားတာပါ။ တွေ့ဆုံမှုအပြီး သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“ဒီ sanctions တွေ အစကတည်းက လုပ်ကတည်းက ဘာကြောင့် လုပ်တယ်၊ ဘယ်ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းရင် ဘယ် sanctions တွေကို ရုပ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုတာကို ပြောထားပြီးသားပါ။ အဲဒီတော့ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းပြီးရင်တော့ sanctions တွေကို စပြီးတော့ ရုပ်သိမ်းမှာပါ။ ဒီခြေလှမ်းတွေက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခုတည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။”
မြန်မာ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာ၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ လက်နက်ကိုင် စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတာတွေကြောင့် အမေရိကန် အစိုးရက စီးပွားရေးအရ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ အရေးယူထားတာပါ။ ဒီလို အရေးယူထားတာတွေကို ဧပြီလမှာ ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ တရားမျှတမှု ရှိယုံနဲ့တော့ ဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲ အရေးယူထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို
မြန်မာ အစိုးရဘက်က ဘယ်လောက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ရှိမလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ စဉ်းစားပြီး တစ်ဆင့်ချင်း ဖြေလျှော့သွားမယ်လို့လည်း ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေလည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်က အခုလို ပြောပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာအကြား သံအမတ်ကြီးအဆင့် ပြန်ပြီး ဆက်ဆံရေး ထူထောင်လာတာကို ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာ အတိုက်အခံတွေ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ပြန်ရုပ်သိမ်းရေး အတွက် မူလက ချမှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေး၊ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်စဲရေး လက်ရှိ ပကတိ အနေအထားတွေကို သုံးသပ်ဖို့လည်း အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်တွေကို တိုက်တွန်းခဲ့တယ် လို့လည်း ကိုဌေးကြွယ်က ပြောပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ကိုဌေးကြွယ်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ဒီလိုဗျ။ အခုချိန်မှာ ကျန်နေသေးတယ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေက လက်နက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။ လက်နက်မှုတွေနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ အကျဉ်းသား ဆိုတာကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာက ပြည်တွင်းစစ်က တောက်လျှောက် ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ ဒီပြည်တွင်းစစ် တောက်လျှောက်ကာလမှာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ဒါက ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ တကယ်တမ်းကတော့ နိုင်ငံရေးအရ ပဋိပက္ခတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီလို လက်နက်ကိုင်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ ဒါတွေကို အခု တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တောင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေတဲ့ အခြေအနေမှာ ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုတော့ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ တကယ်တမ်းကတော့ အားလုံးကို နိုင်ငံရေးအရ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားခံရတဲ့ သူတွေအားလုံးကို ပုဒ်မတွေ ခွဲမနေတော့ဘဲ လွှတ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ကျနော်တို့ပြောတာပါ။”
တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ အထက်လွှတ်တော် အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသာတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းနဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော် ၂ ရပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မြန်မာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အမေရိကန် လွှတ်တော်ကို လာရောက် လေ့လာဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
1/23/2012 07:25:00 AM
အစိုးရတပ်တွေ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေကြောင်း HRW အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေ မှာ စစ်ပွဲတွေ ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး အစိုးရတပ် က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ HRW က ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Human Rights Watch (HRW) လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့နဲ့ Karen Human Rights Group (KHRG) ကရင် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တို့က ပူးပေါင်း ပြုစုထားသော Dead Men Walking: Convict
Porters on the Front Lines in Eastern Burma "သေလူတွေ လမ်းလျှောက်ခြင်း- မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ခြမ်းက ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာတွေက အကျဉ်းသား ပေါ်တာများ" အစီရင်ခံစာ မျက်နှာဖုံးပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအတော်များများက အစိုးရတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်း ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ HRW ရဲ့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာမှာ အခုလို ဖော်ပြထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လကတည်းက ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေအတွင်း မြန်မာ အစိုးရတပ်တွေက ဒေသခံ အမျိုးသမီးတွေကို အဓမ္မပြုကျင့်တာ၊ ဒေသခံတွေကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာ၊ သတ်ဖြတ်တာ တွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ HRW အစီရင်ခံစာက ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင် ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံလူထု ၅ သောင်း လောက် ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်နေရတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။အစိုးရတပ်တွေ
အပြင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ ဟာ ဒေသခံ ကျေးရွာတွေအနီးမှာ မြေမြုပ်မိုင်းထောင် တိုက်ခိုက်တာ တွေ ရှိတဲ့အတွက် ဒီလို
အချက်အားလုံးဟာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်တာ
ဖြစ်တယ်လို့ အစီရင်ခံစာက ထောက်ပြထားပါတယ်။
သတင်းဌာနသည် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက် ရက်စွဲဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ထိုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲတွင်ဘားမားဗီဂျေမီဒီယာအား သိက္ခာကျစေမည့် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ကို တွေ့ ရှိရသည်။ ဒီဗီဘီ ၏ စွပ်စွဲချက်များသည် မှားယွင်းပြီး ၊ ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာ အားကိုးဖြင့် မီဒီယာကျင့်ဝတ် ချိုးဖောက် ကာ အခြား မီဒီယာတစ်ခု အား နစ်နာအောင် တမင်ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုလုပ်ရပ် သည် မီဒီယာ အလွဲသုံးစား
၂၀၀၆နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစကာနှစ်ဖက် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် DVB နှင့် ဘားမားဗီဂျေ အဖွဲ့ တို့ သည် ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလတွင် တရားဝင် လမ်းခွဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဘားမားဗီဂျေ ပြည်တွင်း နက်ဝက်မန်နေဂျာများနှင့် DVB
ဒါရိုက်တာ ကိုအေးချမ်းနိုင် တို့ ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ တွင်မျက်နှာချင်း ဆိုင်တွေ့ ဆုံ အကြေအလည် ဆွေးနွေးပြီးမှ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ကတိက၀တ်များကို ဒီဗီဘီ အနေဖြင့် မပေးနိုင်သဖြင့် ဆက်လက်ပြီး လက်တွဲလုပ်ရန် အခြေအနေမရှိတော့သဖြင့် အားလုံး သဘောတူ လမ်းခွဲ ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
လျှင်ပင် ဒီဗီဘီ ၏ တောင်းဆိုမှုအရ ပြည်တွင်းနက်ဝက်၏ စီမံနိုင်မှု နယ်ပယ် အောက်တွင် ရှိသည့် ဒီဗီဘီ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရုံးများ၊ ကွန်ပြူတာပစ္စည်းများ၊ကင်မရာများ၊ဗီဒီယို တိတ်များကို ချင်းမိုင်ရုံး တာဝန်ခံ ကိုတိုးဇော်လတ် ထံသို့ လွှဲပြောင်း
(၂)DVB နှင့်လမ်းခွဲပြီးနောက် ဘားမားဗီဂျေအဖွဲ့ အနာဂတ်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်း မီဒီယာတစ်ခု တည်ထောင်ရန်အဖွဲ့ ဝင်များဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာထောင်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်
တစ်ပြေးညီပိုမိုသိရှိနိူင်စေရန်ဖြစ်သည်။DVB နှင့့််ပြဿနာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ် စေရန် ငွေကြေးကိစ္စ စွတ်စွဲခံထားရသည့် ကိုမျိုးမင်းနိုင်၊ကိုအောင်မျိုးကျော်တို့ နှစ်ဦးအား ပြဿနာ ဖြေရှင်းမပြီး မချင်း နက်ဝက်တာဝန်ခံများ အဖြစ်မှရပ်စဲထားရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ နှစ်ဦးနေရာတွင်နက်ဝက် စတင်တည် ထောင်ရာ မှာပါဝင်ခဲ့သည့် ကိုအောင်ကြီး(ခ)ကိုအောင်သွင်နှင့်၊ကိုအောင်ထွန်း(ခ)ကိုစံ တို့ က အစားထိုး ဆက်လက်ဦး ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
VJ မှတ်တမ်းရှပ်ရှင်ကားအမည်ကို အသုံးပြုပြီး Burma VJ Media Network ဟု ခေါ်သောအဖွဲ့ ကို တည်ထောင်ထားသည် ဟု ရေးသားထားသည်။ ထိုရေးသားချက်လုံးဝမမှန်ပါ။Burma VJ Network မှာလက်ရှိ
(၅) DVB နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသုံးပြုနိုင်သည့် မှတ်တမ်း ဗီဒီယို၊ဓါတ်ပုံနှင့် အခြားအရေးကြီး သတင်းအချက်
အလက် များအား ပြန်လည် အပ်နှံထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် ဘာမားဗီဂျေမီဒီယာ ၏ လက်ရှိ
့ကြောင့် ဘားမားဗီဂျေမီဒီယာ နက်ဝက် ကို လည်းကောင်း၊ လက်ရှိ ဘားမားဗီဂျေ အဖွဲ့ ဝင် များကို လည်းကောင်း ထိခိုက်နစ်နာစေရန်၊ ဂုဏ်သတင်း ကျဆင်းစေရန် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ရပ် အားလုံးကို ချက်ချင်းရပ်တန့် ရန် ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာ မှအပြင်းအထန် သတိ ပေးလိုက် သည်။ ဘားမားဗီဂျေမီဒီယာ အနေဖြင့် ဒီဗီဘီ ၏ အသရေ ဖျက်မှု နှင့် မီဒီယာကျင့်ဝတ် ချိုးဖောက်မှု များအပေါ်
ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုခြင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ မှ တဆင့် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်း အပါအ၀င် သင့်တော်သောနည်းလမ်းများဖြင့် လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။
1/23/2012 06:53:00 AM
ဆန်ဘုရင် ဒေါက်တာကိုကိုကြီး အရန်ဆန်ဝယ်ယူရေးတွင် နောက်ကောက်ကျ
ဘုရင်နောင် ဆန်ပွဲရုံ တခုမှ ဆန်အိတ်များတင်နေပုံ
ဒိုင်းမွန်းစတား ဒေါက်တာကိုကိုကြီးသည် ပထမဆုံးဝယ်ယူမည့် အစိုးရ၏ အရန်ဆန်ဝယ်ယူရေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးလုပ်အသင်းကို မယှဉ်နိုင်ဘဲ အလဲထိုးခံလိုက်ရကြောင်း ဘုရင်နောင့် စိန်ပန်းလမ်းမှ ဆန်ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပထမဆုံးဝယ်ယူမည့် အစိုးရ၏ အရန်ဆန်ဝယ်ယူရေးကို ကြီးကြပ်မှုကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းကာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှ လက်ဝါးကြီးအုပ် ဝယ်ယူခြင်းမရှိဘဲ တောင်သူများထံမှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ရန် မြို့နယ်အဆင့် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းဝယ်ယူခဲ့သဖြင့် ဒေါက်တာကိုကိုကြီး အနေဖြင့် ဆန်လောကကို လက်ဝါးကြီးအုပ် ချယ်လှယ်ခွင့်မရတော့ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
သမ္မတထံ အရန်ဆန်ဝယ်ယူခွင့် လုပ်ကိုင်နိင်ရန် ချည်းကပ်ခဲ့သော်လည် ၎င်းနှင့်ရင်းနှီးသူ စီးပွားကူးသန်းဝန်းကြီး ဦးဝင်းမြင့်ကိုယ်တိုင်က ကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သူ့လူကို အခွင့်အရေးပေးသည်ဟု ဆန်လောက၏ အထင်လွဲမှုကို ဦးဝင်းမြင့် ခံယူလိုပုံမရကြောင်း ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့နေသူတစ်ဦး ဆိုသည်။
ငွေရင်းအင်အားကြီးမားစွာဖြင့် ဆန်လောကကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး ပြည်ပပို့ရန် ဆန်ကို ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံများမှ တဆင့်ခံ သွင်းခိုင်းရာတွင် ဆန်အရည်အသွေးကို
အသားစီးယူကာ ဆန်ပွဲရုံများကို အနိုင်ကျင့်လေ့ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
“ဘုရင့်နောင်စစ်ကြောရေးရှေ့က ဂိုထောင်တွေမှာ ဆန်ကားတွေ ရီဂျက်ထိပြီး ဆန်ချဖို့အလှည့်ရောက်အောင် တန်းစီစောင့်နေရတယ်“ ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပထမဆုံအကြိမ်ဝယ်ယူမည့် အရန်ဆန် တန်တစ်သိန်းကို ပုဂ္ဂလိက၊ သမ၀ါယမ၊ အစိုးရ ငွေကြေးရင်းနှီးမှု အချိုးညီထည့်ဝင်ပြီး ဦးချစ်ခိုင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ CB ဘဏ် ဦးခင်မောင်အေးက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးအောင်သန်းဦး အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်ပါဝင်သည့် အရန်ဆန်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီက စီမံခန့်ခွဲကာ စတင်ဝယ်ယူနေပြီဟု ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ်များတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။
1/23/2012 06:37:00 AM
SNLD ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် ဆုံးဖြတ်
တရားဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် SNLD ပါတီသည် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်တော့မည်ဟု SNLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဇန်န၀ါရီ ၂၀ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ပြောသွားသည်။
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်နှင့်အတူ ဇန်နဝါရီ ၁၃ရက်နေ့တွင် တောင်ငူထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် SNLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဇန်န၀ါရီ ၂၀ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား တရားဝင်လုပ်ကိုင် နိုင်ရန်အတွက် SNLD သည် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟု ပြောသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် မှတ်ပုံတင်သည့်ကိစ္စရပ်အား
လာမည့်ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲစာရင်း ကိုယ်စားလှယ် လောင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းမှုများအပြီးကို စောင့်ဆိုင်းပြီးမှသာ ပြုလုပ်မည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
SNLD ပါတီသည် ယခင်က ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားငါးပါတီ မဟာမိတ်အဖွဲ့ UNA တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယခုတွင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း ဦးဆောင်သော ရှမ်းအမျိုးသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ (၁၈)ရက်နေ့တွင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနေအိမ်သို့ လာရောက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်း ငြင်းဆိုလိုက်သည်ဟု သိရှိရသေးသည်။ "ကျွန်တော်တို့ဟာ လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အချိန်မရတော့တာကြောင့် ဝင်မပြိုင်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ SNDP က ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းနဲ့ အဖွဲ့ကလည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လာရှိုးမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော်နေရာမှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့ ၁၈ ရက် နေ့က အိမ်ကိုလာပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ငြင်းဆိုတယ်ဆိုတာ ၂၀ ရက်နေ့ကပဲ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းညွန့်လွင် လက်မှတ်နဲ့ SNDP ကိုပြန်ပြီး ပို့လိုက်ခဲ့ပါတယ်" ဟု SNLD ပါတီမှ ဦးစိုင်းလိတ်က ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ကိုးမိုင်လမ်းရှိ ဦးခွန်ထွန်းဦးနေအိမ်တွင် နှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့သည့် အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းမှပြောသွားခဲ့သည်။
ပါတီသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒုတိယမဲအများဆုံး အနိုင်ရခဲ့သည့် ပါတီဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ခဲ့ခြင်းမရှိဟုလည်း သိရသည်။
1/23/2012 06:29:00 AM
တရုတ်စားသုံးဆီကြောင့် ပြည်တွင်းဆီဈေး ထိခိုက်
တစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရုတ်စားသုံးဆီများမှာ မြန်မာ့ဆီဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စားသုံးဆီဈေးနှုန်းများမှာ အဆမတန်ကျဆင်းပြီး ပြည်တွင်းဆီဈေး ထိခိုက်မှုများ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် စားသုံးဆီများသည် အေးခဲသည့်ဂုဏ်သတ္တိ မရှိသည့်အတွက် ယခုနှစ် ဆောင်းရာသီအခြေအနေမျိုး၌ တောင်ပေါ်ဒေသများတွင် အများဆုံးရောင်းရသည့် ဈေးကွက်ဝင် စားသုံးဆီ အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်လာခဲ့ကြောင်း ဆီလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်စားသုံးဆီ တစ်ပိဿာလျှင် ၂၃၂၀ ကျပ်၊ စားအုန်းဆီ တစ်ပိဿာလျှင် ၁၈၀၀ ကျပ်၊ နှမ်းဆီ တစ်ပိဿာလျှင် ၂၄၅၀ ကျပ်နှင့် ပဲဆီတစ်ပိဿာလျှင် ၃၁၀၀ ကျပ်ရှိကြောင်း ပြည်တွင်းဆီဈေးကွက်အတွင်းမှ သိရှိရသည်။
တရားမဝင်ဆိုပေမယ့် တရားဝင်ပေးသလို ဝင်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆီထွက်သီးနှံ ဈေးကွက်မှာလည်း ပြည်တွင်းဝယ်လိုအား ကျဆင်းနေတယ်။ လက်ရှိမှာ တရုတ်ဝယ်လက်ဘက်ကိုပဲ ရောင်းနေရတယ်”ပာု မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်မှ ဆီထွက်သီးနှံရောင်းအားအခြေအနေကို ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
1/23/2012 06:25:00 AM
ဘာဘာညာညာ ဇာဂနာ စင်္ကာပူဟောပြောပွဲ (ရုပ်/သံ)
သိတဲ့ ကျနော်ပါခင်ဗျာ့ .. (စင်္ကာပူနိုင်ငံက ရသအလင်းက ဦးစီးကျင်းပပေးတဲ့ ရုန်းကန်ရှင်သန်နေသော အလှတရားများ အနုပညာဟောပြောပွဲ အ၀င်မှာ လုပ်ထားတဲ့ ဘာဘာညာညာဇာဂနာနဲ့အမှတ်တရပါခင်ဗျာ့..(ဓါတ်ပုံ-ဇာဂနာ ဖေ့စ်ဘုတ်)
မြန်မာအစိုးရနှင့်KNUကိုယ်စားအလှယ်အဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်/သံ) အစအဆုံး
KNU and Burmese Government Peace Talk Sky Net part 1_6
KNU and Burmese Government Peace Talk Sky Net part 2_6
KNU and Burmese Government Peace Talk, Sky Net part 3_6
KNU and Burmese Government Peace Talk, Sky Net part 4_6
KNU and Burmese Government Peace Talk, Sky Net part 6_6
မြန်မာအစိုးရ နှင့် KNU ကိုယ်စားအလှယ်အဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်/သံ) အစအဆုံး ကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ခင်ညွန့် ထောက်လှမ်းရေးတွေက နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ ဒါဏ်ရာနဲ့ ကိုသက်နွယ် (ခ) ကိုငြိမ်းလူ ကွယ်လွန်
၂၂ ဇန် ၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေ။ ။ လတ်တလော ထောင်ကထွက်ပြီး တပတ်အကြာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်း ကိုသက်နွယ် (ခ) ကိုငြိမ်းလူ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် ထောက်လှမ်းရေးတွေက နှိပ်စက်ခဲ့တာကြောင့် ဒါဏ်ရာနဲ့ရောဂါတွေ ရခဲ့ပြီး လက်ရှိ သမတ အစိုးရလက်ထက်မှာလဲ ဆက်လက် ဖမ်းဆီးထားတာမို့ အခုလို ကွယ်လွန်ခဲ့ရတာလို့ အမဖြစ်သူ ဒေါ်မာလာနွယ်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ ။
၁၃ရက်နေ့က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ထောင်တွင်းမှ ရရှိလာတဲ့ အသဲရောဂါနဲ့ ဝေဒနာကို မချိမဆန့်ခံစားရင်း ၂၂ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကိုသက်နွယ်(ခ)ညိမ်းလူ၏ နာရေးဖိတ်စာ
ထောင်ထဲမှာ အသည်းရောဂါခံစား နေရာကနေ ပြန်လွတ်လာသည်ထိ မသက်သာဘဲ (၂၁.၁.၂၀၁၂)နေ့တွင် အသည်းအသန်ဖြစ်၍ ဝေဒနာခံစားနေရသည့်ပုံများ
ကိုသက်နွယ်(ခ)ညိမ်းလူဟာ ၂၀၀၂ခုနှစ် မှာဗုံးဖောက်ခွဲမှုဆိုတဲ့ မတရားစွပ်စွဲချက်နဲ့ ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်း ကျခံခဲ့ရပါတယ်..။ ထောင်တွင်းမှာ သွားများတချောင်းမှ မကျန်အောင် အပြင်းအထန် နှိပ်စက်ခံခဲရပါတယ်...။ အာဏာရှင် ဗိုလ်သန်းရွှေ အာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲဘို့အတွက်
အဓိက ဒေါက်တိုင်ဟာ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်ပါ..။ မိမိသားသမီးတွေနဲ့ ခွဲခွါနေရတာကိုကြတော့ ကိုယ်တိုင်ခံစားတတ်တယ်..။ ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းတွေမှာ ထောင်ကထွက်လာမယ့် သားကို မျှော်ပြီး လွတ်မလာတဲ့ အတွက် မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မိခင်တွေ၊ သားဖြစ်သူ လွတ်လာတဲ့နေ့မှာ ဝမ်းသာလုံးစို့ပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့မိခင်တွေကို ဗိုလ်ခင်ညွှန့် ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ။
၁၉၈၈ကနေ ၂၀၁၁ခုနှစ်အထိ ထောင်ထဲမှာ
သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူတွေ သေရာပါ ဒဏ်ရာနဲ့ ဒုက္ခိတဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သား၊သမီးတွေကို တွေ့မြင်ခွင့် မရလိုက်ပဲ အသေမဖြောင့်ခဲ့ရတဲ့ မိခင်၊ ဖခင်တွေအတွက်.. သားသမီးချင်း၊ မိဘချင်း ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ..။
ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ ခေတ်ကာလအကြိုက်ကို ကြိုသိနေပြီး ထောက်လှမ်းရေး အကွက်အတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်ကို ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားတခုထဲနဲ့ အမြင်မှန်ရသွားပြီဆိုပြီး ခွင့်လွှတ် လွယ်ကြတဲ့သူတွေ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ...။ နာစရာကို လွမ်းစရာနဲ့ ဖြေစရာ တကွက်မှ မရှိသလို.. လွမ်းလောက်လို့လားဗျာ.. ဘုရား၊ တရားပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီး တရားသိနေတယ် ဆိုလည်း ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေ
အကုသိုလ်တွေကို နောင်ဘဝအတွက် မပါအောင် ယောင်္ကျားပီပီ ဝန်ခံတောင်းပန်ပေါ့..။
ပေဖြစ်လည်းခံ တူဖြစ်လည်းခံနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ တခြားနေရာမှာခွင့်လွှတ်လွယ်တာ မပြောလိုပေမယ့်.. ကျားက သက်သက်လွတ်စားပြီဆိုပြီး ခွင့်လွှတ် လွယ်လွန်းတာကတော့ ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကို မညှာတာရာရောက်ပါတယ်..။ တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နောင်တတရားရတဲ့ စကားတလုံး မထွက်လာသ၍ ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိလို့ မြင်ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေနဲ့ အာဏာစာခွက်လုရင်း မြောင်းထဲရောက်ခဲ့တဲသူ နှိုင်းယှဉ်စရာမရှိပါ..။ မစင်ပုံထဲက လောက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဆင်းမဆယ်မိဖို့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို ခွင့်လွှတ်လွယ် သူများအား လွမ်းလောက်လို့လားလို့ မေးပါရစေ၊ ပြောပါရစေဗျာ။
﻿ ကွမ်းစားရာ၌ ထည့်စားသော ဆေးအချို့ကြောင့် နောက် ဆက်တွဲ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု များပြားလာ
ကွမ်းစားရာတွင် နိုင်တီတူး၊ ဖိုးတီဖိုက် စသည့်ဆေးပြင်းများ ထည့်သွင်းစားသုံးမှု များပြား လာသောကြောင့် ကွမ်းစားခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုလည်း ပိုမိုများပြားလာကြောင်း သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ကုဌာနမှ အငြိမ်းစားပါမောက္ခ ဌာနမှူး ဦးကိုကိုမောင်က ပြောပြခဲ့ ပါသည်။
အလားတူ ကွမ်းကို ကွမ်းသီး၊ ထုံး၊ ဆေးရွက်တို့ဖြင့် မိရိုးဖလာ စားသုံးနေကြရာမှ နိုင်တီတူး၊ ဖိုးတီဖိုက်စသည့် ဆေးပြင်းများထည့်သွင်း စားသုံးလာမှုကြောင့် ခံတွင်းရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများသည်လည်း ယခင်ကထက် သက်တမ်း ထက်ဝက်ခန့်စော၍ ဖြစ်ပွားလာသည်ကို တွေ့ရှိလာရကြောင်း သိရသည်။
လူထု လူတန်းစားမရွေး ဈေးနှုန်း သင့်တင့်စွာဖြင့် နေရာအနှံ့ ကန့်သတ်ချက်မရှိ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ စားသုံးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ကွမ်းစားသုံး မှုနှုန်းမှာလည်း နိုင်ငံ၌ မြင့်မားလျက် ရှိနေပြီး ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှ စတင်၍ ကွမ်းစားသည့် အလေ့အကျင့် ရှိလာရာ ကွမ်းစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေမှာလည်း ယခင်က အသက် ၄၀ ၀န်းကျင် နောက်ပိုင်းမှသာ သွားဖုံးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုများ တွေ့ရှိရသော်လည်း ယခုအခါအသက် ၂၅ နှစ်ဝန်းကျင် အရွယ်မှစ၍ ဖြစ်ပွားနေမှုများ ရှိလာကြောင်း သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေး တက္ကသိုလ် မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ကုဌာနမှ အငြိမ်းစား ပါမောက္ခဌာနမှူး ဦးကိုကိုမောင်က ပြောပြခဲ့ပါသည်။
“မြန်မာ့ရိုးရာထုံး၊ ကွမ်းသီး၊ ဗမာဆေးတွေနဲ့ စားနေတာ မဟုတ်ဘဲ ပြုပြင်ထားတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ စားသုံးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကန့်သတ်ချက် တွေမရှိဘဲ လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ကွမ်းနဲ့ပတ်သက် တဲ့ ပြဿနာတွေ နောက်ပိုင်းပိုများလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း မူးယစ် ကြီးကြပ်ရေးမှူးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးစံရှိန် က ဆိုပါသည်။
“ကွမ်းသီးခြမ်းတွေကို ကန့်နဲ့ စိမ်လိုက်တဲ့အခါ ကွမ်းသီးကပွလာတယ်။ ပွလာတဲ့ကွမ်းသီးကို အရောင် ဖွေးပြီးလှနေအောင် ဓာတုချွတ်ဆေးတစ်မျိုးနဲ့ အရောင်ချွတ်တယ်။ ပြီးတော့ရေဆေးပြီး နေလှန်း အခြောက်ခံတယ်။ ဆေးရွက်ကြီးကိုလည်း အရက်၊ ပျားရည်တွေနဲ့ ရောစိမ်ထားပြီးတော့ နှပ်ဆေးသဘောမျိုး အသွင်ပြောင်းထားတယ်။ ထုံးကိုလည်းရေနဲ့ဖျော်၊ အပေါ်ယံရေကြည်တွေကို သွန်ပစ်ပြီး အနည်ထိုင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ထုံးအနှစ်သားကိုမှ ပျစ်ပျစ်ဖျော်ထားတဲ့ နို့မှုန့်တွေနဲ့ ရောလိုက်တယ်။ ထုံးကို စားတဲ့အခါမှာ နို့မှုန့်တွေပါတဲ့အတွက် ထုံးသားက ဆိမ့်ဆိမ့်လေးဖြစ်နေတယ်။ ထုံးကလည်း ပြုပြင်ထားတဲ့အတွက် သဘာဝ ထုံးမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါ တွေတင်မကပါဘူး။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကနေ တရားမ၀င်လမ်းကြောင်း တွေကတစ်ဆင့် တင်သွင်းလာကြတဲ့ နိုင်တီတူး၊ ဖိုးတီဖိုက်၊ စတားဗမာ ဆေး၊ ဆစ်ဂနယ်စတဲ့ ဆေးပြင်းတွေ ကိုလည်း ထည့်စားကြပါသေးတယ်။ ဒီဆေးတွေရဲ့သဘာဝက အလွန်ပြင်းထန်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ ၀င်တဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့ ကွမ်းသီးအထုတ်လေးတွေကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးဟာ သဘာဝကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြုပြင်ထားတဲ့ ဓာတုဗေဒဒြပ်ပေါင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စားကျင့်ပါသွားရင်လည်း စွဲလမ်းစေတတ်တဲ့ အာနိသင် တွေရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောပြခဲ့ပါသည်။ EMG
1/22/2012 10:29:00 PM
မြိတ်မြို့ နယ် NLDရုံးခန်းဖွင့်ပွဲနှင့်ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲအခမ်းအနား
မြိတ်မြို့ နယ် NLD ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၂၁)ရက်နေ့ နံနက် ၈း၃၀ မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလံတင်ခြင်း၊ မြို့ နယ်ဆိုင်းဘုတ်ဖွင့်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဧည့်ပရိသတ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၉း၃၀ မှာ အခမ်းအနား ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
1/22/2012 10:03:00 PM
စင်္ကာပူနိုင်ငံ အခြေစိုက် “ရသအလင်း” အဖွဲ့က စီစဉ်တဲ့ “ရုန်းကန် ရှင်သန်နေ
သော အလှတရား- Surviving Beauty” အနုပညာ ဟောပြောပွဲနဲ့ ရုပ်ရှင်ပြပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ညက စင်္ကာပူ နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့ရာမှာ စင်္ကာပူ အာဏာပိုင်တွေက ဆင်ဆာကင်းလွတ်ခွင့် မရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတချို့ကို ပြသခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာနှင့် ဟာသသရုပ်ဆောင် ဇာဂနာ ခေါ် ကိုသူရ။ (Photo: AFP)
အပိတ်ပင်ခံရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီးတဲ့ “လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ” ပွဲတော်မှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဆန်ကာတင်အဆင့် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ
ဆင်ဆာကင်းလွတ်ခွင့် လက်မှတ် မရယူထားတဲ့အတွက် အဲဒီဇာတ်ကားတွေကို ပြသခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာ လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာက RFA ကို ပြောပါတယ်။ပရိသတ် ရာနဲ့ချီပြီး တက်ရောက်အားပေးတဲ့ အဲဒီဟောပြောပွဲ အမေးအဖြေကဏ္ဍမှာ တက်ရောက်လာသူတွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာက ပြန်လည် ဖြေကြားသွားပါတယ်။
1/22/2012 09:46:00 PM
AGD ဘဏ်က မော်တော်ကားနဲ့ တိုက်ခန်းတွေကို အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ရောင်းချပေး မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်
၁။ အငှားဝယ်ယူ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့်ပစ္စည်းများ။
၁။ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊
၂။ Computer နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
၃။ တယ်လီဖုန်းကဒ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
၄။ ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ။
၆။ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်များ။
၇။ မော်တော်ယာဉ်နှင့် ယန္တယားများ။
၈။ လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းနှင့် Generator များ။
၉။ တိုက်ခန်းနှင့် လုံးချင်းအိမ်ယာများ။
၂။ ကုန်စည် / ပစ္စည်းတန်ဘိုးအလိုက် ခွင့်ပြုသက်တမ်းနှင့် နှုန်းထား။
(၁) ကျပ် ၅၀သန်းအထိ။
- သက်တမ်း ၁နှစ်သက်တမ်း။
- လက်ငင်းပေးချေရန် တန်ဘိုး၏ ၂၀%။
- ငှားရမ်းခနှုန်း တန်ဘိုး၏ ၇%။
- ၀န်ဆောင်ခ တန်ဘိုး၏ ၁%။
-အရစ်ကျ ပေးသွင်းရန်ငွေ တန်ဘိုး၏ ၈၀%ကို (၁၂)ရစ် အညီအမျှခွဲ၍ (၁၂)လ လစဉ်ပေးသွင်းရန်။
(၂) ကျပ်၅၀သန်းအထက်မှ ကျပ်၁၅၀သန်းအထိ။
- သက်တမ်း ၂နှစ်သက်တမ်း။
- လက်ငင်းပေးချေရန် တန်ဘိုး၏၂၀%။
- ငှားရမ်းခနှုန်း တန်ဘိုး၏ ၁၄%။
- အရစ်ကျ ပေးသွင်းရန်ငွေ တန်ဘိုး၏ ၈၀%ကို (၂၄)ရစ် အညီအမျှခွဲ၍ (၂၄)လ လစဉ် ပေးသွင်းရန်။
(၃) ကျပ် ၁၅၀ သန်းအထက်မှ ကျပ်၃၀၀သန်းအထိ။
- သက်တမ်း ၃နှစ်သက်တမ်း။
- ငှားရမ်းခနှုန်း တန်ဘိုး၏ ၂၁%။
- အရစ်ကျ ပေးသွင်းရန်ငွေ တန်ဘိုး၏ ၈၀%ကို (၁၂)ရစ် အညီအမျှခွဲ၍ (၃)လ တစ်ကြိမ် ပေးသွင်းရန်။
၃။ သတ်မှတ်သက်တမ်း မစေ့ရောက်မီ အပြေအကြေပေးသွင်းပါက မူလက ပေးသွင်းခဲ့သည့် ငှားရမ်းခငွေမှ အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါမည်။
(၁) ၁နှစ်ချေးငွေကို (၆)လတွင်းပေးသွင်းလျှင် မူလပေးသွင်းထားသည့် ငှားရမ်းခငွေ၏ ၂၅%။
(၂) ၂နှစ်ချေးငွေကို (၆)လတွင်းပေးသွင်းလျှင် မူလပေးသွင်းထားသည့် ငှားရမ်းခငွေ၏ ၅၀%။
(၃) ၂နှစ်ချေးငွေကို (၁၂)လတွင်းပေးသွင်းလျှင် မူလပေးသွင်းထားသည့် ငှားရမ်းခငွေ၏ ၂၅%။
(၄) ၃နှစ်ချေးငွေကို (၁၂)လတွင်းပေးသွင်းလျှင် မူလပေးသွင်းထားသည့် ငှားရမ်းခငွေ၏ ၄၀%။
(၅) ၃နှစ်ချေးငွေကို (၂၄)လတွင်းပေးသွင်းလျှင် မူလပေးသွင်းထားသည့် ငှားရမ်းခငွေ၏ ၂၀%။
၄။ အရစ်ကျငွေ ပေးသွင်းရန် သတ်မှတ်ရက်။
စတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့သည် (၂၂)ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပါက ကပ်လျှက်လ၏ လဆန်း(၅)ရက်အတွင်း။
စတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့သည် (၂၃)ရက်နေ့မှ နောက်ပိုင်းဖြစ်ပါက နောက်တစ်လ၏ လဆန်း(၅)ရက်အတွင်း။
လစဉ် လဆန်း(၅)ရက်အတွင်း ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ပျက်ကွက်သည့်ရက်များအတွက် အရစ်ကျပေးသွင်းရမည့် ငွေပမာဏပေါ်တွင် ကျပ်၁၀၀လျှင် တစ်ရက် (၄)ပြားနှုန်းဖြင့် ပျက်ကွက်ကြေးပေးဆောင်ရပါမည်။
၆။ ကုန်စည်/ ပစ္စည်းပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း။
လစဉ် အရစ်ကျ ပေးသွင်းရမည့်ငွေကို (၃)ကြိမ် ဆက်တိုက်ပျက်ကွက်ပါက အငှားဝယ်ထားသူသည် အငှားဝယ်ယူထားသည့်ပစ္စည်းကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခံရမည် ဖြစ်ပြီး၊ ပေးသွင်းထားသည့် ငွေများအားလုံးကို အဆုံးရှုံးခံရမည် ဖြစ်သည်။
၇။ အငှားရောင်းချသူ (Authorized Dealer) ၏ အရောင်းကော်မရှင်မှာ ပစ္စည်းတန်ဘိုး၏ ၁% ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ထားဝယ်၊ မန္တလေး၊ ပုသိမ်မြို့များသို့သွားမည်
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ဂျွန်မက်ကိန်းနှင့် အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်များကိုတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်တွင် ယနေ့ညနေ ၄ နာရီမှ ၅ နာရီအထိ တစ်နာရီကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီတွေ့ ရစဉ် ဓာတ်ပုံ - ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ)
ရန်ကုန်- ဇန်န၀ါရီ ၂၂
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်အဖြစ် လာမည့်ဇန်န၀ါရီ ၂၉ရက်တွင် ထားဝယ်မြို့သို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
နှစ်ပတ်အတွင်း နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်၃ကြိမ်ထွက်ရှိရန်ရှိပြီး ထားဝယ်ခရီးစဉ်ပြီးလျှင် ဖေဖ၀ါရီ ၄၊၅ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့သို့သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဖေဖ၀ါရီ ၇ရက်တွင် ပုသိမ်မြို့သို့နေ့ချင်းပြန်ခရီးသွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှသတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင် သတင်းဌာနများကိုလည်း မိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့် သတင်းလိုက်ပါယူနိုင်ရန် ဖိတ်ကြားထားသည်။
1/22/2012 07:39:00 PM
ကချင်ပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မျှော်လင့်နေကြတယ်
အပြင်ကို မျက်လုံးဝှေ့ကာ ငေးမောကြည့်နေလိုက်တယ်။ ရထားလမ်းတစ်လျှောက် တဲအိမ်လေးနှင့် ကင်းစောင့် စစ်သားတွေကို တစ်မိုင်မှာ တစ်စုလောက် မြင်နေရတယ်။ ဝါးတဲလေးထဲမှာ စောင်ခြုံပြီး မီးလှုံနေကြတယ်။ သတင်းတွေက
အစုံကြားနေရတယ်။ ဈေးသတင်း၊ ရေဒီယို သတင်း၊ ရပ်ကွက် သတင်းတွေ စုံနေအောင်ပါပဲ။ မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် တို့ကြား စစ်ဖြစ်နေကြောင်း နေ့၊ ည ကြားနေရပါတယ်။
- - အသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးငယ်တွေ။ အဖိုးအိုအဖွားအိုတွေပါ မကျန် ခုတော့ ကချင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်ပိုင်း ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းမှော် အထိ စစ်မီးက တစ်စစ လောင်ကျွမ်းနေပြီ။ KIA () () “” ဒီစစ်ပွဲတွေကြောင့် ဖားကန့်မြို့နယ်က ကျောင်း၊ ဖားကန့်
မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းမလည်း ခရီးသွားလာခွင့်တွေကိုလည်း ခေတ္တ ပိတ်ထားလိုက်ရတယ်။ ကုန်ဈေးတွေ တစ်ဟုန်ထိုး တက်လာတာနဲ့ အညီ ဝယ်သူမဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။
-ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တွေလည်း ရပ်နားခိုင်းလိုက်တော့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီး နေရပ်သို့ တစ်ရက်ကို အယောက် ၁
ထောင် ကျော်ပြန်နေကြတယ်။ ခုဆို ဖားကန့်၊ ဆိုင်းတောင်၊ လုံးခင်း စတဲ့ ကျောက်စိမ်းမှော်တွေ လူတွေ မရှိပဲ တိတ်ဆိတ်နေပါပြီ။ ဖားကန့်မြို့နယ်က ဆင်းလာကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေကို ချင်းတွင်းမြစ်မှာ ဖွေးနေအောင် မြင်နေရတယ်လို့ မှုံရွာ ဒေသခံ တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒီလောက်များတဲ့သူတို့ ဘယ်ကို ခြေဦးတည့်ကြမှာလဲ။ ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မှာလည်း ညနေ ၅နာရီ မှောင်ရီပျိုးလာပြီဆို ခြံတံခါးသော့ခတ်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့မှာ နှင့်
မြန်မာ အစိုးရနှစ်ဖတ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ဆွေးနွေးနေတာကို ကြားရတော့ ကချင်ပြည်နယ်က ပြည်သူတွေအားလုံး ၀မ်းသာပျော်ရွှင်သွားကြတယ်။ ပြည်နယ်အေးချမ်းတော့မှာလား။ အပြောင်းအလဲကြီး တစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ လည်း တွေးပျော်ရင်း ဆောင်းတွင်းအအေးဒဏ်ကို အံတုရင်ဆိုင်ရင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
1/22/2012 07:28:00 PM
တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့် သွားမည် ဟု ဂျွန်မက်ကိန်းပြောဆို
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း “တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်
တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ် စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါမယ် လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကလဲ အရေးကြီးပါတယ် အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖယ်ရှားဖို့က တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ သမ္မတရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကြည့်မှာပါ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ ရွေးကောက်ပွဲပေါ့ “ ဟု အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မတ်ကိန်းက ပြောသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မတ်ကိန်းနှင့်အခြားသောအမတ်များသည်၂၀၁၂ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ၂၂ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၃ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်မတ်ကိန်းသည် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
1/22/2012 07:25:00 PM
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဂျွန်မက်ကိန်း တို့ အဖွဲ့ တွေ့ ဆုံ (ရုပ်/သံ)
" … ဒီ sanction တွေ အစကတည်းက လုပ်ကတည်းက ဘာကြောင့်လုပ်တယ်၊ ဘာတွေ ဘာတွေ ဘယ်ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းလို့ရှိရင် ဒီ sanction တွေကို ရုတ်သိမ်းပေးမယ် ဆိုတာ ပြောထားပြီးသားပါ။ အဲဒီတော့ ဒီ … သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းပြီးလို့ ရှိရင်တော့ santion တွေ စပြီးတော့ ရုတ်သိမ်းမှာပါ။ ဒီခြေလှမ်းတွေက ရွေးကောက်ပွဲ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခုတည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး … "
ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဂျွန်မက်ကိန်း ဦးဆောင်သည့် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံမှုအပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
1/22/2012 07:10:00 PM
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဂျွန်မက်ကိန်း ဦးဆောင်သည့် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံ-- (ဓါတ်ပုံ)
ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဂျွန်မက်ကိန်း ဦးဆောင်သည့် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံ--
အဖုိုးဖြစ်သူကနေ မြေးဖြစ်သူအထိ အာဏာလက်ဆင့်ကမ်းပြီး အုပ်ချူပ်နေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနုိုင်ငံအကြောင်း တစေ့တစောင်း (ရုပ်/သံ)
အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီကနေ့ ခောတ်စားနေတာတခုကတော့ နုိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်ပေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။ ဒီအထဲမှာ အာရှရဲ့  အဆိုးဆုံး အာဏာရှင်နိုင်ငံ..ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေသာမက နိုင်ငံတကာကိုပါ နျူကလီယနည်းပညာတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့နုိုင်ငံ...မြန်မာ ဆီးရီးယား အီရန် စတဲ့ နုိုင်ငံတွေကို တရားမ၀င်စစ်လက်နက်တွေ ခိုးရောင်းချနေတဲ့..မြောက်ကိုရီးယားနုိုင်ငံလဲ ပါဝင်ပါတယ်…အဖုိုးဖြစ်သူကနေ မြေးဖြစ်သူအထိ အာဏာလက်ဆင့်ကမ်းပြီး အုပ်ချူပ်နေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနုိုင်ငံအကြောင်း တစေ့တစောင်းကို ဒီတပါတ် အစီအစဉ်အတွက် တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
မိုးအေး တင်ဆက်သည် (ဒီဗွီဘီ)
1/22/2012 06:49:00 PM